Golaha aqalka sare ayaa maanta Akhrinta 1-aad Marsiiyay hindise sharciyeedka shirkadaha. – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Golaha aqalka sare ayaa maanta Akhrinta 1-aad Marsiiyay hindise sharciyeedka shirkadaha.
Golaha aqalka sare ayaa maanta Akhrinta Kuwaad Marsiiyay hindise sharciyeedka shirkadaha, kaasi oo ay soo gudbisay Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Dalka.
Sharcigaan Warshadaha haddii uu meeelmaro waxa uu sal dhig u noqon doonaa isku xerka ganacsiyada dalka iyo kuwa suuqyada Caalamka, fududeynta maamulada, diiwaangelinta shirkadaha ganacsiyaga iyo maalgashiga, waxaana kulanka maanta ay golaha aqalka sare ku yeesheen xarunta golaha akhrinta kuwaad ku marsiiyeen hindise sharciyeedka warshadaha dalka.
Guddoomiyaha Golaha aqalksa sare ee BFSoomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa furay kulanka oo shir gudoominyay, waxaana uu akhiriyaya ajandaha laga doodayo maanta.
Ahmiyada uu u leeyahay dalka ayuu ku ekaa maadaama uu xeer hooseedka uu yahay in ka doodista iyo su’aalo weydiinta ay tahay akhrinta 2-labaada, sidaa daraadeed eng.Cabdullaahi Cali Xasan Wasiirka Ganacsiga iyo warshadaha ayaa ka hor akhriyaya heerarka uu soo maray hindise sharciyeedkaan, waxaana uu sheegay in la soo geliyay latashiyo farabadan oo ka mid ah hay’adaha dalka.
Kalfadhiga 5-Aad kulankiisa 12-aad ee golaha maanta waxaa soo xaadiray 29 xubnood, iyadoo uu shir gudoominayay Guddoomiyaha oo ay wehliyaan labadiisa ku-xigeeno waxaana soo xeray Gudoomiyaha golaha Aqalka sare mudane Cabdi xaashi Cabdullaahi.